नेपाली एकताको गतिलो उदाहरण ! कृष्ण ओलीका लागि जुट्यो झण्डै दुई करोड ! – Nepal Trending
On ११ माघ २०७५, शुक्रबार १६:५७
काठमाडौं । सधै बिरामी बोक्नका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स शुक्रबार बिहान राजधानीको चक्रपथमा धेरै संख्यामा निस्किएका छन् । ठूलो संख्यामा एम्बुलेन्स सडकमा निस्किएपछि मानिसलाई आश्चर्य लागेको छ ।
बिरामी बोक्नका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स किन निस्किएको भन्ने प्रश्नमा कतिले एम्बुलेन्स चालकको आन्दोलन होला भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिए । तर त्यसो नभई शुक्रबार एम्बुलेन्स दिवस परेकाले सडकमा एम्बुलेन्स देखिएका हुन् ।दिवसको अवसरमा चक्रपथ परिक्रमा गर्नका लाकाठमाडौं । एउटा नेपाली विपतमा पर्दा संसारभरका नेपालीहरु कसरी एकजुट भएर सहयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण फेरि एकपटक देखिएको छ ।
तर, प्रोस्थेस्टिस्ट श्रेष्ठले धेरै महंगो हातखुट्टा नराख्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।‘अहिले जति पनि पैसा छ भनेर महंगो राख्दा पछि समस्या पर्न सक्छ । किनकी तिनीहरुको मेन्टेनेन्स खर्चिलो हुन्छ । सामान फेर्नुपर्‍यो भने बिदेशबाटै मगाउनुपर्छ । बिग्रियो भने बना उन विदेश नै दौडिनुपर्छ,’ उनले भने ।यस्तै कृत्रिम खुट्टाको सकेट एक–डेढ वर्षमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘व्यक्ति दुब्लाउने वा मोटाउने हुँदा पनि कृत्रिम खुट्टा खुकुलो वा कसिलो हुन सक्छ । त्यसैले सकेट फेरिरहनु पर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
कतिपयमा कृत्रिम खुट्टा राखिसकेपछि बिस्तारै दुख्न छोड्छ । अन्यथा थेरापी गर्नुपर्छ ।हातको केस खुट्टाभन्दा जटिल हुन्छ । कृत्रिम हातहरु विभिन्न गुणस्तरमा हुन्छ र निकै महंगा हुन्छन् । कृष्णको बायाँ हात फेदैदेखि काटिएको हुनाले सबैभन्दा बढि खर्च त्यसैलाई लाग्ने छ । श्रेष्ठको अनुमानमा मायोइलेक्ट्रिक हात राख्दा ५–७ लाखमा पाइन सक्छ तर, बायोनिक हात राख्न भने नेपाली ४०–५० लाख नै पर्छ । ‘नेपालमा बायोनिक हात उपलब्ध छैन, विदेशबाटै मगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।फेरि पनि उनको भनाइमा यस्तो महंगो हात राखेर पछिसम्म त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न सक्छु भन्ने कृष्णमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ ।
कृत्रिम हात राखेपछि कृष्णले आफैं खाने तथा दिशा धुनेसम्म गर्न सक्नेछन् । उच्च प्रविधिको हातका औंलाहरु पनि सक्रिय हुन्छन् । यस्तोमा प्राय तीनवटा औंलाले काम गर्छन् ।यस्तो औंलाको सहायताले चियाको कप समात्न, कम्युटरमा टाइप गर्नदेखि ड्राइभिङ गर्न समेत सकिन्छ । स्क्रिन टच मोबाइल चलाउन भने भ्वाइस कमान्डको सहयोग लिनुपर्छ । त्यसो त पाँचवटै औंलाले काम गर्ने बायोनिक हात पनि आइसकेका छन् ।रुकुमको सानेभेरी गाउँपालिकामा जन्मिएका २१ वर्षिय कृष्ण ओली विद्युत प्राविधिक हुन् । दाङ को तुलसीपुरस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा उनले केही महिना अगाडि मात्रै अस्थाई जागिर पाएका थिए ।
गत जेठ २५ गते विद्युत लाइन बिस्तार गर्ने क्रममा पोलमा चढ्दा उनलाई ११ हजार भोल्टको करेन्ट लागेको थियो । भारतको अस्पतालले फर्काइदिएका उनलाई कीर्तिपुर अस्पतालले बचाएको थियो । तर उनले दुवै हात र एक खुट्टा गुमाए ।कठिन अवस्थामा कृ ष्णका लागि बलियो खम्बा बनेर उभिइन् उनकी १८ वर्षीया पत्नी रुपा । बलियो मुटु भएकी रुपाले अकल्पनीय बज्रपात सहनुपर्दा पनि हिम्मत हारिनन् । श्रीमानको हौसला बढाइन् । रुपा जस्ती पत्नी पाउनुलाई धेरैले उनको भाग्यको रुपमा चित्रण गर्छन् । कृष्ण र रुपाको प्रेम विवाह अन्तरजातीय मात्रै नभएर अन्तरधार्मिक पनि हो ।
कृष्ण हिन्दू हुन् भने रुपा क्रिस्चियन । रुपाका बुवाले उनकी आमालाई छोडेर अर्को बिहे गरेका थिए । उनकी आमा अहिले देशबाहिर छिन् । कृष्णको दुर्घटनापछि आफूलाई माइतीका आफन्तहरुले अर्को विहे गर्न सुझाव दिएको भए पनि आफूले श्रीमानको साथ कहिल्यै नछाड्ने उनी बताउँछिन् । कृष्णका लागि ठूलो रकम जुट्नुमा रुपाप्रतिको करुणाले पनि धेरै भूमिका खेलेको देखिन्छ ।कृष्ण र रुपा अहिले कुलेश्वरमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । अहिले उनीहरुका साथमा कृष्णका हजुरआमा, आमा, दाजु र बहिनीहरु छन् । नर्सिङको पढाई गरिरहेकी रुपा श्रीमानको दुर्घटनापछि उनैलाई स्याहारेर बसिरहेकी छन् ।
कृष्ण ओलीको लागि त सहयोग जुट्यो तर, देशमा अरु पनि थुप्रै कृष्ण ओलीहरु दर्दनाक अवस्थामा छन् । अहिले उनको जस्तै केस भएका केही व्यक्तिको कथा बाहिर आएको छ । कृष्णले पाएको सहयोग देखेर उनीहरुलाई पनि आशा जागेको छ ।बैजनाथ–८ लुन्दी बाँकेका २३ वर्षीय बुद्धिमान कुँवरले भारतको सिमलामा कामको सिलसिलामा करेन्ट लागेर दुई हात र एक खुट्टा गुमाएका थिए । उनको उपचारका लागि १२/१३ लाख खर्च भइसकेको छ भने कृत्रिम हातखुट्टा राख्न लाग्ने पैसा उनको क्षमताभन्दा बाहिर छ। उ नको अपांगताले परिवारको विजोक भएको छ ।
उनले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरुसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारी हरिकाजी ढुंगानाले पनि कार्यालयको कामका सिलसिलामा करेन्ट लागेर दुई हात र एक गोडा गुमाएका छन् ।नेर्पा ८ रामपुर, खोटाङका ढुं गाना प्राधिकरण खोटाङको वितरण शाखामा काम गर्थे । तार तान्नेदेखि पोल ठड्याउनसम्म उनको काम हुन्थ्यो । तार जोड्न पोलमा चडेका बेला ११ हजारको करेन्टले उनलाई लपेट्यो । त्यतिबेला उनी अढाई घन्टासम्म पोलमै झुण्डिएका थिए ।हरिकाजीका ८५ वर्ष नाघेका बाबुआमा छन् । परिवारमा श्रीमती, एक बहिनी र दुई छोराछोरी छन् ।